Posted by အင်ကြင်းသန့် at 2:35 PM
Excellent job! Very long but I didn't understandathing. Poor me! The picture is nice though and I like your new template! Keep it coming!
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အတွေးလေးတွေနဲ့ စိတ်ကူးလေးပါလား
ဘ၀မှာ စိတ်ကူးမိတဲ့အတိုင်း လက်တွေ့ဖြစ်လာရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲနော်
ချစ်တဲ့ ညီမလေးအင်ကြင်းရဲ့ အပြစ်ကင်းတဲ့ ဖြူဖြူစင်စင် စိတ်ကူးလေးတွေအားလုံး
တဂ်ပို့လေးကို ခုလို စိတ်ကူးလှလှ
အတွေးကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
သူနဲ့လည်း အမြန်ဆုံးနီးပါစေ.. နားလည်မှုရပါစေလို့...
စိတ်ကူးသက်သက်ကနေ လက်တွေ့ဖြစ်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါ၏၊....။
အိမ်ကသေးသေးလေးနော် လှေကားက အိမ်ခေါင်မိုးရောက်နေတယ်..ဒါပေမယ့် အိမ်ကလေးက ချစ်စရာလေး...မိသားစု၅ယောက်တည်းဆိုတော့ များလည်းမများဘူး နည်းလည်းမနည်းဘူး အတော်အတင့်ပဲ...အစ်မရဲ့ခံစားချက်တွေသွန်ချတဲ့ အထပ်က ဟိုး..အပေါ်ဆုံးအထပ်ကလားဟင်? အစ်မတို့အိမ်က ဘယ်လမ်းလဲ? နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ? ဟီး....မမဆီကိုလာပြီး မုန့်ဖိုးတောင်းမလို့လေ...
အိမ်ကိုလွမ်းနေတာလား။ ကိုယ်ချင်းစာပါ၏။ မြန်မြန်တွေး မြန်မြန်မေ့လိုက်ပါ။ မဟုတ်လျှင် အားငယ်ဝမ်းနည်းစိတ်တို့ နေရာယူလာတတ်၏။ အိမ်လွမ်းစိတ်ကို အလုပ်နှင့်ဖိသတ်ပါ။
စာလုံးပေါင်းလေးလည်း ပြင်လိုက်ပါ။ အလွန်ရယ်စရာကောင်း၏။ မှားနေသည်မှာ "သေးသံသာများဖြင့်"။ အလွန်နံစော်နေမည့် အင်ကြင်းညစ် ဖြစ်နေပါပြီ။
အာာာာာာာာာာာာာာာာာာာ.....သေပီဆရာပဲ ကိုမိုးကတော့ မိပြန်ပြီ...ကျနော်တော့ ရှက်လိုက်တာမှ...ပြန်ဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရီလိုက်ရတာလည်း ပြောမနေနဲ့ ....ချက်ချင်းကိုပြင်လိုက်ပြီနော် အာစရိ......ကျေးဇူးပဲ (တော်ချက်...တော်ချက်)
အင်ကြင်းေ၇ နင့် ၇ဲ့ စာလုံးလေးတွေ က မျက်လုံးထဲမှာ ထင်းခနဲ ထင်းခနဲ မြင်ေ၇ာင်စေတယ်...
အကယ်ရွေ့များ ကျွန်မသာ ယောက်ျားလေး တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့မည် ဆိုရင်တော့ ထိုကွင်းပြင်ကြီးထဲတွင် ပေါက်ရောက်နေသော မြက်ပင်ရိုင်းများကြားမှာ လဲလျောင်းအိပ်စက်ရင်း ကျယ်ပြောလှသည့် အပြာရောင် ကောင်းကင်ကြီးထဲမှာ အဆုံးအစမရှိ လှပစွာ မျောလွင့်နေသည့် အဖြူရောင် တ်ိမ်စိုင်တိမ်လိပ်များကို ငေးမောကြည့်နေချင်မိပါသည်။
အင်ကြင်းေ၇ ပန်းချီကား တစ်ချပ် ကို သွားပြီးမြင်ေ၇ာင်မိသလို ၇င်ထဲ ကို ထိမိတယ်......
စိတ်ကူးကောင်းနဲ့တည်တဲ့အိမ် ချစ်ဖို့ကောင်း၏။ အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါစေနော့။
ထမင်းခေါ်ကျွေးမယ့်သူကတော့ အမေရှိမှဘဲနော် အင်း....အခုတော့ ကိုယ့်ဘာသာ စားချင်စား မစားချင်နေ ဒီလိုပါဘဲ ဘ၀ဆိုတာ တဖြေးဖြေးငယ်သွားတာမှ မဟုတ်တာ နောက်ဆို ကိုယ့်ကခေါ်ကျွေးရမယ့်အလှည့် ရောက်တော့မှာနော်
အကယ်ရွေ့များ ယောက်ျားလေး တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုရင် အမလေး ဒေါ်ဂျင်းဂျင်းရယ် အမတို့ကခေါင်းထဲမှာ အထီးအမကိစ္စထည့်ကို မစဉ်းစားပေါင် မြက်ခင်းထဲ အိပ်ချင်ရင်အိပ်ချလိုက်ပေါ့ မဟုတ်တာလုပ်တာမှ မဟုတ်တာ
ဘယ်တုန်းကမှ မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ပြောချင်တာများ ပြောရောပေါ့ ဘာတွေများ မြိုသိပ်နေရတာလည်း?
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့ဟ စိတ်ကူးသက်သက်နဲ့ပြောသွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ညီမလေးရေ....... အရမ်းကို သိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့ အတွေးလေးပါပဲ။ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ အတွေးထဲက ဘ၀မျိုးလေး မမ ညီမလေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေကွယ်။ စာတွေ၊ ကဗျာတွေကို ရေးတတ်တဲ့ ညီမလေး စိတ်ကူးလေးကလည်း သိပ်လှတာပဲ။ ပေးထားတဲ့ နာမည်လေးကိုက အေးချမ်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေး။ ချစ်သူကို ချစ်တတ်တဲ့ ညီမလေး တူညီတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်။
ပြောချင်တဲ့ စကားတွေကို ပြောခွင့်ရသလို မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ စကားတွေကိုလည်း ပြောစရာမလိုပဲ သူသိနိုင်ပါစေ..။
မနက်ကို အရမ်းနောက်ကျမှ အိပ်တဲ့ အကျင့်ကို မလုပ်နဲ့နော်။ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မယ်...။
ဟဲဟဲ...အင်ကြင်းရေ မဖွကျေးနော်..ညီမက လိမ္မာပါတယ် :) သာယာချမ်းမြေ့တဲ့ ဘဝလေးတစ်ခုအကြောင်း ကိုဖတ်ရတာ အေးချမ်းမှုတွေ ကူးဆက်သွားသလိုပဲဗျ။
ညီမလေး အင်ကြင်း ...နေ့လည်က ရောက်ခဲ့၊ ဖတ်ခဲ့ပြီးသားပါ...ခုမှလာပြန်မန့်တာ၊ ညီမလေးရဲ့ အေးချမ်းတဲ့ အတွေးလေးတွေ လက်တွေ့နဲ့တထပ်ထဲ ကျပါစေကွယ်...:)
နေ့လည်က လာဖတ်ပြီး မန့်သေးတယ် မရလို့ပြန်သွားတယ်..
ညီမ ရဲ့ အတွေးထဲက အိမ်ကလေးက ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ.. ထာဝရပျော်စရာ အတွေးထဲက အိမ်လေးထဲမှာ နေနိုင်ပါစေ..
ဂျင်းရေ..သိပ်ချစ်စရာကောင်းတယ် အရေးအသားလေးက ..ကြည်နူးစရာလည်းကောင်းတယ်နော်..
လှပတဲ့စိတ်ကူးလေးပါပဲ၊ တွေးရင်းစိတ်ကူးရင်း ဖြစ်သွားတာတွေ အများကြီးပါ၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ် အိမ်မက်များမက်ပါစေ၊ အဲဒီလိုအိမ်လေးတွေ့ရင် ပြောရမလား၊
ညီမလေးရေ..နေ့လည်ကပို့စ်အသစ်တက်တွေ့ပေမယ့် အိမ်ပြန်ရောက်မှ အေးအေးဆေးဆေးဖတ်ချင်တာနဲ့ ခုမှဖတ်ပြီးတယ်။ ဖြူစင်ချစ်စရာအတွေးစိတ်ကူးလေးပါပဲ။ မျက်စိထဲမှာလည်း မြင်ယောင်သွားတယ်။ ဖြစ်ချင်တဲ့ဘ၀နဲ့ဆန္ဒ တစ်ထပ်တည်းကျနိုင်ပါစေလို့ မဇွန်ဆုတောင်းပေးသွားတယ်နော်။း)
ရေးမယ့်ရေးတော့လည်း အပီကိုရေးထားတာပါလား၊ စာနဲ့အတူတောင် စီးမျောသွားတယ်.. တားတားလည်း အဲ့လိုလေးပဲ အေးဆေးနေချင်တာ..။ အထုတော့ ဗြဲ.ဗြဲ.. စဉ်းစားရတာ ခေါင်းမွှေးကျွတ်အောင် လုပ်တဲ့သူထဲမှာ တားတားမပါဘူးနော်..မမအင်းကြင်း.. ဟိ.. စိတ်ကူးနဲ့ဘ၀ တစ်ထပ်တည်းကျပါစေခင်ဗျာ..
မောင်လေး တိုရင်စီတူ..း)
I read this article two times as soon as you uploaded it. Your post was too good and smooth and hadn't any fault. I think, your strive and then your desire that's inside your heard, these two items were united on this post. That's mean you can create be sufficient post. I want to you that you far away from sorrow and difficult things. If possibe you just settle down with your lovely family as your imagine house. If I got chance, I wish I could your best neighbourhood. If we got time we can rally in your nice house where we'll make together something for eat and chatting about our childhood life the whole day.
HOW PEACEFULL. :)
အေးချမ်း သိမ်မွေ့တဲ့ စိတ်ကူးလေးအတိုင်း ဖြစ်လာမှာပါ။ စိတ်ကူးလေးက တကယ့်ကို သာသာယာယာပဲ။ ဖန်တီးချင်တဲ့ အိမ်လေး အကြောင်းတောင် ရေးချင်စိတ် ဖြစ်သွားရတယ်။
(မေမေပြောစကားနဲ့ဌားပြီးပြောရရင်)တော့ - - -
အင်မတန် အေးချမ်းတဲ့ စိတ်ကူးလေးပါလား ဂျင်ဂျင်းရယ် ။
စိတ်ကူးထဲက အတိုင်း ချစ်တဲ့ မိသားစုနဲ့ အတူ အမြန်ဆုံး ပျော်ရွှင်စွာ နေရပါစေနော် ။
မပြောဖြစ်တဲ့ စကားလေးတွေလည်း အမြန်ဆုံး ပြောဖြစ်ပါစေ လို့.....
အတွေးထဲက အိမ်လေးကို ကိုဏီးတို့လာလည်ရင် နှင်ထုတ်မှာလားဟ....း))
(မနေ့ညက ရောက်ခဲ့သေးသကိုး.....။ စိတ်ပဲရှိပြီး လူက စာမဖတ်နိုင်တော့လို့ပြန်သွားတာ...။။ စကားမစပ်..... အိမ်ဒီဇိုင်းပြောင်းဖို့ပြောမလို့ ကိုဏီးကချောင်းနေတာ....။ အခုတော့ အိုကေသွားပြီ....။ ဟိုအိမ်ပုံလေးက တစ်အားသေးနေသလိုမျိုးကိုး.......း))
ဂျင်းရေးထားတာ ကောင်းတယ်ဗျ ...
ခု ဆိုက်ပုံစံလေးလည်း မိုက်တယ် ...
ခုလို အမြဲတမ်း နေနိုင်ပါစေဗျာ ... ဆုတောင်းပေးပါတယ် ...
အနော့်ကို စောင်းပြောတယ် ... ဟွန်း သထိထား ...
အေးဆေးလေးဘဲ နေ့တိုင်း ဖြည်းဖြည်းချင်း လာဖတ်နေတယ်.. ပို့စ်အဟောင်းတွေကိုလေ.. လွယ်လွယ်ကူကူအော်စရာမရျိတော့ ဒီမှာပဲ လာအော်လိုက်တယ်နော်.. လာအားပေးနေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်။
ဂျင်းရေ.... လာလည်တယ် ညီမလေး...
မမ စိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ မိသားစုလေးက
ဖတ်ရတာနဲ့ တင် ပျော်ဖို့ ကောင်းနေပြီ.. :)
ဒါနဲ့ မမ.. cbox မထားတော့ဖူးလားဟင် ?
အစ်မ တင်ထားတဲ့ သီချင်းလေးကောင်းတယ်။
အရင်တုန်းကလည်း ကျနော်ခဏခဏနားထောင်ဖူးတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။